Ben’ny tanàna sy halatr’omby - ewa.mg
Ben’ny tanàna sy halatr’omby
News - Ben’ny tanàna sy halatr’omby
Tra-tehaka tao amin’ny ben’ny tanàna iray any Miandrivazo ny omby halatra miisa roa avy any Ankondromena, tamin’ny 8 jona lasa teo. Nalain’ny mpitandro filaminana avy hatrany ireo omby ary natoka-monina. Hatolotra ny Fitsarana any Morondava ity raharaha ity.
L’article Ben’ny tanàna sy halatr’omby est apparu en premier sur AoRaha.
Nivoaka tamin'ny : 15/06/2019
Cnaps: fanampiana vola ny zokiolona sy ny very asa
Mahatsapa ny olana sedrain’ny zokiolona ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana sosialy (Cnaps) amin’izao tranga Covid-19 izao. Araka izany, misy ny hetsika manokana hanampiana azy ireo, karazany roa. Voalohany, fanampiana vola tsy averina ho an’ny zokiolona mandray fisotroan-dronono latsaky ny 600 000 Ar isaky ny telo volana. Homena nanomboka ny volana oktobra 2020 teo hatramin’ny desambra 2020. Mahazo 150 000 Ar ny mandray latsaky ny 400 000 Ar isaky ny telo volana, 125 000 Ar ho an’ny latsaky ny 500 000 Ar ary 100 000 Ar ho an’ny latsaky ny 600 000 Ar. Miisa 15 000 ny mpiasa very asa, vokatry ny krizy Covid-19, ary miisa 55 000 ny zokiolona mandray latsaky ny 600 000 Ar.Faharoa, vola 175 000 Ar, tsy averina, ho an’ireo mpiasa naato tamin’ny asany taorian’ny faharoa, fahatelo ary fahefatry ny telovolana 2019, sy ny telovolana fahatelo voalohany ny taona 2020, ka tsy mpikambana intsony ao amin’ny Cnaps, nanomboka ny 1 marsa 2020 hatramin’ny 30 septambra, nefa tsy naverina niasa taty aoriana. Azo atao ny mijery ny antsipiriany ao amin’ny adiresy internety www.cnaps.mg, espace travailleur.Njaka A.L’article Cnaps: fanampiana vola ny zokiolona sy ny very asa a été récupéré chez Newsmada.
Fampandrosoana ny eny ifotony: nojeren’ny minisitera ny tetikasa ho an’ireo Mikea
Nidina ifotony nijery ny ala sy ny tanàna itoeran’ireo Mikea tao amin’ny kaomina Basibasy fokontany Bedo sy Vorehe ny solontenan’ny ministeran’ny Fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy (MAHTP) tamin’ity herinandro ity. Notarihin’ny tale jeneralin’ny fananan-tany Ratolorantsoa Petera sy ny tale jeneralin’ny tahirim-pirenena ho an’ny fananan-tany (FNF). Nofidina manokana ity faritry ny Mikea ity mba hijerena ifotony ny zava-misy any an-toerana sy ny fandaminana ny fiaraha-monina ao amin’izy ireo. Nisy ny dinidinika sy fifankalozana natao tamin’ireo vondron’olona Mikea ahafahana mamolavola tetikasa ho azy ireo. “Tsy afaka tanterahina eo ambony latabatra fotsiny fa mila fandinihana ifotony ny asa hatao. Jerena ny singa rehetra sy ny tena tranga misy mba hahafahana mampifandray ny zavatra ho volavolaina amin’ny tena zava-misy. Fomba fiasa napetraky ny eo anivon’ny MAHTP izany”, hoy ny tompon’andraikitra.Fampandrosoana ny tanan-dehibe… Tafiditra ao anatin’ny sehatry ny atrikasam-pirenena handinihana ny fametrahana ny fiarovana ny zon’ny fananan-tanin’ny fokonolona rahateo izao fidinana ifotony izao. Anisan’ny vokatra andrasana amin’izany atrikasa izany ny famoahana ny famaritana iraisana ny atao hoe vondron’olona mba hampidirana azy ao anatin’ny volavolan-dalàna momba ny zon’ny fananan-tany iraisana.Ankoatra izany, vita sonia, omaly ny fifanarahana fiaraha-miasa eo amin’ny MAHTP sy ny Ivontoeram-pirenena misahana ny antontanisa (Instat). Natao izany ahafahana mandrindra ny antontanisa sy ny antontam-baovao ho an’ny tanan-dehibe. “Ahafahana mijery ny fampandrosoana tokony hatao izany”, hoy ny tale jeneralin’ny MAHTP, Rabe H., omaly tetsy Anosy.Synèse R. L’article Fampandrosoana ny eny ifotony: nojeren’ny minisitera ny tetikasa ho an’ireo Mikea a été récupéré chez Newsmada.
Praiminisitra Ntsay Christian: “Hafaingano ny fitsarana ireo voafonja”
Hentitra ny Praministra Ntsay Christian noho ny fahitana fa mitarazoka loatra. Anisan’ny nivoitra tamin’ny lahateniny, omaly ny momba ireo voafonja, mbola voatazona ela loatra any am-ponja.“Tokony hafainganina ny fitsarana ireo voafonja. Efa misy ihany ny ezaka ho amin’izany”, hoy izy, tetsy Anosy. Nomarihina tamin’izany ny faha-60 taona ny mpandraharahana ny fonja ka nanehoany izany toromarika izany. Na izany aza, nambarany fa efa nisy ny dingana vitan’ny minisiteran’ny Fitsarana toy ny eo amin’ny lafiny sakafo ho an’ireo voafonja. Nanteriny koa fa azo ametrahana fitokisana ireo voafonja rehefa miverina eny anivon’ny fiaraha-monina satria tsy toerana famaizana ny fonja. “Natao hisaintsainana hiverenana eny anivon’ny mpiara-belona ny toeram-pamonjana”, hoy ihany izy.Mitaky fampitaovana ny mpandraharaha ny fonjaFitakiana sy fangatahana maromaro. “Tsy fotodrafitrasa ihany fa eo koa ny fampitaovana. Tena sarotra ny asa, indrindra eo amin’ny fiara ho an’ny voanfonja. Efa simba ny ankamaroany ka tokony hojerena ny fampitaovana…”, hoy kosa ny minisitry ny Fitsarana Randrianasolo Jacques tamin’ny lahateniny. Eo ny fiaraha-miasa amin’ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena ny amin’ny tokony hanomezana ny mpandraharaha ny fonja fitaovam-piadiana, toy ny basy. Na izany aza, nanafatrafatra ny minisitra. “Aoka hampiasaina amin’ny tokony ho izy avokoa izany fitaovana izany fa tsy sanatria hampanofaina ny jiolahy. Aoka isika handala ny fahendrena sy ny fahamatorana”, hoy ihany izy.Tsiahivina fa maherin’ny 27 000 ireo voafonja manerana ny Nosy mitsinjara amin’ireo fonja 41. Nisy ny fanehoana ny asa sy ny fitaovan’ny mpandraharaha ny fonja tamin’izany.Synèse R. L’article Praiminisitra Ntsay Christian: “Hafaingano ny fitsarana ireo voafonja” a été récupéré chez Newsmada.
Ben’ny Tanàna, Andriantsitohaina Naina: « Betsaka ny asa vita na teo aza ny olana samihafa… »
Lahateny voalohany amin’ny taona 2021. “Maro ireo olana nolalovana. Teo ny Covid-19 sy ny olana maro samihafa. Tsy nahasakana antsika anefa izany. Betsaka ny asa vita sy ny vokatra azo tsapain-tanana”, hoy ny ben’ny Tanànan’Antananarivo, Andriantsitohaina Naina, omaly.Fiaraha-mientana sy firaisankinaNiarahaba sy nirary soa ireo mpiasa rehetra eo anivon’ny CUA ny tenany tamin’izany. Nankasitraka amin’ny asa sy ny ezaka vita tamin’ny taona lasa. “Taona voalohany niarahantsika nitantana ny tanàna. Iray izay. Telo sisa. Aza kivy ary aza variana”, hoy ihany izy.Natsidiny sahady fa hiampy ny vokatra amin’ity taona ity rehefa ho vita ireo fotodrafitrasa lehibe ary ho tanteraka ireo tetikasa maro samihafa. Notsiahiviny avy eo fa zava-dehibe ny fahavitan’ny asa tamin’ny taona 2020 tao anatin’ny fiaraha-mientana sy ny firaisankina.Fanadiovana ny tanànaMatoky ny tenany fa hitohy ary hihatsara izany amin’izao taona vaovao izao. “Anisan’ny porofo mivaingana amin’izany ny nahafahantsika nitantana ny fetin’ny faran’ny taona tao anatin’ny filaminana. Mankasitraka sy midera amin’ny ezaka sy vokatra”, hoy ihany izy. Anisan’ny nitondran’ny ben’ny Tanàna fanamarihana manokana ny fanadiovana. Nisaorany ny filoham-pirenena sy ny praiminisitra ary ny minisitry ny Rano tamin’ny fifanampiana sy ny fiaraha-mientana. Tahaka izany koa ny eo anivon’ny DUD, ny DG Samva ary ireo ekipa rehetra niasa mafy tamin’ny fetin’ny Noely sy ny faran’ny taona.Synèse R. L’article Ben’ny Tanàna, Andriantsitohaina Naina: « Betsaka ny asa vita na teo aza ny olana samihafa… » a été récupéré chez Newsmada.
Vangaindrano: loharanon-karena ny « Centre Océanographique »
Havoazina amin’izao fotoana izao ny « Centre océanographique » any Vangaindrano, sampana iray ao amin’ny oniversite hanaovana fikarohana momba ny ranomasina sy ny harena ao aminy. Foibe fanaovana fikarohana izy io, ary efa betsaka ny vahiny tonga tany an-toerana nianatra sy nanao fikarohana momba izany.« Foibe atao hifantohana amin’ny toekarena manga, hanovozam-pahalalana ka hahitana loharanon-karena rehefa haintsika ny mitrandraka azy », hoy ny governoran’ny faritra Atsimo Atsinanana, ny Dr Mahafaky Justin. Anisan’ny manohana ny GIZ ho fanampiana ireo mpanjono amin’ny fitrandrahana ny harena an-dranomasina. Misy rahateo ny tetikasa Swiofish 2, manampy amin’ny jono. Manome 5% amin’ny harinkarena faobe eto Madagasikara ny sehatry ny jono koa “manampy ny mpanjono ny voka-pikarohana avy ao amin’ny Centre Océanographique, hiarovana ihany koa ny harena an-dranomasina”, hoy ihany ny governora.Misy mpianatra any an-toerana ankehitriny manao fikarohana, manomana “doctorat”. Nametrahan’ny faritra angovo mandeha amin’ny herin’ny masoandro io foibe io, ahazoana miasa tsy tapaka. R.MathieuL’article Vangaindrano: loharanon-karena ny « Centre Océanographique » a été récupéré chez Newsmada.
Nangingiana ny andiany faha-26: navotan’i Sisca sy i Fandrama ny lazan’ny «Festival Donia »
Na i Sisca na i Fandrama no mamarana hatrany ny andiam-pampisehoana nandritra izay andiany maro izay . Soa fa mbola teo izy ireo, nitarika ny mpankafy ary mamelona hatrany ny “Festival Donia”, hetsika tsy afa-misaraka amin’ny tantaran’i Nosy Be. Nikatona ny alahady alina teo ny andiany faha-26 tamin’ny “Festival Donia”. Toa ny mahazatra nandritra izay andiany maro izay, i Fandrama sy ny tariny no nanakatona izany. Efa fotoana ifanomezana isaky ny faran’ny “Donia” izy ity, ka tsy nahasakana ny mpankafy ao Nosy Be ny hatsiaka sy ny orana tsy nampoizina. Tsy heno firy rahateo izany rehefa tena nampiakatra ny hafanana ry Bemamy sy ny tariny, izay niezaka hatrany namaly ny hetahetan’ireo mpankafy azy. Araka ny efa nanampoizana azy, ny alin’ny asabotsy no maro mpijery indrindra tao amin’ny kianjan’Ambodivoanio. Azo antoka avy hatrany fa tonga hijery an’i Sisca izy ireo. Tanora maromaro, nanao fehiloha mena izay nozaraina teo am-pidirana no nifamotoana hifety, io alina io. Tsy nisy niala na ry Sisca na ireo mpankafy, hany ka efa tamin’ny 5 ora maraina vao nisaraka ny rehetra. Fotoana efa ifanomezana ihany koa ny an’ny tarika AmbondronA sy ireo mpankafy ao Nosy Be. Vitsivitsy ny mpijery, saingy tsy nangina kosa ny fotoana niakaran-dry zalahy ny sehatra. Tsikaritra fa efa misy ireo niandry fotsiny ny fandalovan’ny tarika any an-toerana, hifampizara gadona hafa ankoatra ny mahazatra. Hany nisongadina tamin’ireo mpanakanto vao nisondrotra i Jhon Mc, satria nahaliana ny mpijery ny hahita azy mivantana. Mpanakanto mbola tanora dia tanora, avy any amin’ny faritra Sava ary mivoy ny karazana salegy ihany izy. Efa fantatry ny mpijery ny hirany toa ny “Tsy mavozo la guerre”, ary mihetsika dia mihetsika miaraka amin’ireo mpandihiny i Jhon Mc. Azo antoka fa hanana ny hoaviny izy, aoriana kely… Maro ireo nandiso fanantenanaZara raha nisy mpijery ny andro roa voalohan’ny “Donia” andiany faha-26. Asa na nisy fiantraikany tany amin’ireo mpanakanto izany, satria dia maro koa no nandiso fanantenana. Voalohany tamin’izany i Dalvis, izay tena tsy arakaraka ny fampanantenana mialoha nataony tao anaty “Facebook” mihitsy ny seho natolony. Kivy tamin’ny havitsian’ny mpijery? Noheverina ho maro mpijery ihany koa ny andro faharoa, ny zoma, satria nifandimby an-tsehatra tamin’io i Jerry Marcoss sy i Janga Ratah. Indrisy, iny angamba ny seho tsy nisy mpijery indrindra tamin’ny tantaran’ny “Festival Donia”. Efa tsy manaitra ny mpankafy intsony ve ry Jerry Marcoss? Fanontaniana mipetraka. Tsy nafana rahateo ny sehatra nialoha izany, satria dia toa ireny nihira an’efitra foana ireny ny tarika Rassiga, any vahiny avy any ivelany nandray anjara tamin’iny andiany faha-26 iny. Tsy nisy na hira iray aza mba fantatry ny mpijery mialoha. Tsy tafiditra tamin’izy ireo rahateo ny gadona pop rock izay nentin’ireto vahiny renioney ireto. Nanao izay ho afany ihany koa i Lys Chagliss, mpanakanto avy any Mahajanga, saingy tsy nahazo na tehaka tamin’ny mpijery aza. Sady tsy nisy mpitendry rahateo nanaraka azy ka toa ngeza loatra ho an’ity mpanakanto ity ny sehatra. Soa fa navotan’i Smaven izany, ka mba takontakona teo.Nialoha ny niakaran’i Fandrama ny andro farany, mbola nahakivy ihany ny niseho. Tsy araka izay niheverana azy ny seho nataon-dry Omary sy Harrys, izay zanak’i Nosy Be. Asa na vokatry ny tahotra nahita ireo mpijery, na tsy ampy fiomanana mihitsy ito farany, fa dia tsy tafiditra hatramin’ny farany tanatin’ny fampisehoana. Niezaka nanarontsarona izany ihany ireo mpitendry nanaraka azy.Mila harenina haingana ny lesokaNandalo sedra maro ny “Festival Donia”, nandritra izay andiany taona maro nodiaviny izay… Mbola nahadingana soa aman-tsara ny andiany faha-26 ihany, na dia efa tsy takona hafenina aza ny olana sedrain’ity hetsika ara-kolontsaina anisan’ny nalaza indrindra taty amin’ny faritry ny ranomasimbe Indianina ity. “Tsy maintsy misy hatrany ny Donia, raha mbola ilain’i Nosy Be ny fisiany. Nandalo krizy maro fa tsy mbola nitolefika na dia eo aza ireo sakantsakana mahazo ny festival Donia”, hoy ny teny fampidirana nataon’i Daniel Boisson, izay filohan’ny Cofestin am-perinasa. Toa azy koa, maniry ny hitohizan’ny “Festival Donia” hatrany ireo nifandimby nandray fitenenana tamin’ny lanonam-panokafana. Tsapa kosa anefa fa raha te hiverina amin’ny lazany taloha na hihoatra an’izany, fotoana izao hitondrana fanarenana ho an’ity hetsika ara-kolontsaina mampiavaka an’i Nosy Be ity. Eo ny lafiny fikarohana mpanohana, fa anisan’ny ilain’ny “Donia” ihany koa ny fiverenan’ny hetsika ho ao am-pon’ny mponin’i Nosy Be, satria izy ireo no “mpanohana voalohany”. Mila ezaka kosa ny fikarakarana, indrindra eo amin’ny lafiny artistika sy ny fisafidianana ireo mpanakanto handray anjara. Eo koa ny lafiny fampahafantana ny hetsika, izay tsikaritr’ireo vahiny sy tompon-tany fa tsy ampy mihitsy tamin’ity andiany ity. Manantena fiovana mankany amin’ny fanatsarana amin’ny andiany manaraka! L’article Nangingiana ny andiany faha-26: navotan’i Sisca sy i Fandrama ny lazan’ny «Festival Donia » a été récupéré chez Newsmada.
Fanararaotana eny amin’ny CTC: hofaizina mafy ireo mibizina fanafody
Hentritra ny fanjakana amin’ny alalan’ny tatitra navoakan’ny filankevitry ny minisitra, ny alarobia teo, nilaza fa hofaizina mafy ireo manararaotra mampividy fanafody ny marary eny amin’ny CTC sy hopitaly ary CSB.Maimaimpoana avokoa ny fanafody rehetra fitsaboana ny covid-19 toy ny azythromicine, magnésium, vitamine C, lovenox ary dexamethasone eny amin’ny CSB, hopitaly ary CTC19. Tsy maintsy vidian’ny marary madiodio kosa anefa ny fanafody hafa ankoatra ireo, toy ny fanafody diabeta na ny fandaminana ny fo sy ny lalandra na ireo fanafody hitsaboana ny aretina mitaiza na ny aretina hafa.Hisy ny lamina manokana handrindrana ny fitantanana ny fanafody eny anivon’ireny toerana fandraisana marary ireny. Harahi-maso akaiky izany hialana amin’ny gaboraraka sy ny fanararaotana izay mampitaraina indrindra ny marary sy ny mpikarakara azy tato ho ato.Nohamafisin’ny tatitry ny filankevitry ny minisitra ihany koa fa maimaimpoana ny fanaovana fitiliana covid-19 etsy amin’ny HJRA sy eny amin’ny Village Voara Andohatapenaka. Maimaimpoana koa ny fanomezana ny taratasy fanamarihana ny fitiliana na ny valiny izany. Iharan’ny fanasaziana mafy ireo mitaky vola amin’ireo olona tonga eny manao fitiliana.Nohamafisina koa fa maimaimpoana ny fanaovana scanner mahakasika ny covid-19 eny amin’ny hopitaly manara-penitra rehetra manerana ny Nosy.Mitohy hatrany ny famatsiana oxygène ireo toerana mandray mararin’ny covid-19.Tatiana AL’article Fanararaotana eny amin’ny CTC: hofaizina mafy ireo mibizina fanafody a été récupéré chez Newsmada.
Valanaretina hafa koa… mahavoa
Mahery vaika ny valanaretina Covid-19 andiany faharoa na ny karazany avy atsy Afrika Atsimo amin’izao, haingam-pifindra, malaky tonga amin’ny fahasarotana ny marary. Tsy vitan’izay, mamitaka ny aretina. Ao ny marary misy soritr’aretina, nefa tsy ahitana tsimokaretina nony anaovana fitiliana. Na ny mifamadika amin’izay: tsy misy soritr’aretina, nefa mitondra tsimokaretina rehefa anaovana fitiliana.Amin’izany, misaritaka be ihany ny sain’ny sasany. Tsy mahalala intsony izay henoina sy inoana? Na tsy ampy ny fanazavana… Mbola be rahateo ny tsy fantatra momba io valanaretina io, indrindra amin’ny hoe andiany vaovao: ny karazany, ny fisehony, ny fivoarany… Efa amin’ny andiany fahatelo, ohatra, ny any Eoropa sy Amerika, ary hoe mety mifindra amin’ny alalan’ny maso sy ny sofina ny aretina. Mba marina?Izay no mahatonga ny fanelezana ny honohono, ny ankifonofono, ny famendrofendroana… Lasa zary karazana valanaretina hafa ny raharaha? Mahatonga tahotra ho azy, tsy fahatokisana fitsaboana, tsy fanajana fepetra sakana hiadiana amin’ny fihanaky ny valanaretina… Tsy eo anivon’ny fiarahamonina ihany no idonan’izany fa hatramin’ny marary avy koa no sahirana, fa miseholany etsy sy eroa ny korontana an-toerana.Zava-doza: miara-miely amin’ny karazana valanaretina ny karazan-tsaho toy izany. Tsy fantatra intsony izay marina sy diso, izay mahasoa sy manimba… Mifangaro voraka amin’izany avokoa ny karazana aretina, ny fisehony, ny fivoarany, fitsaboana azy, ny vokany… Loza iray, loza roa: sarotra ny raharaha, manahirana, mafy… Na ny firenen-dehibe aza, misy valalanina sy fanina amin’izany amin’izao.Anisan’ny mampahazo vahana izany ny tambajotra sosialy, ohatra. Mbola “radio kapoaka” amin’ny faritra sasany na amin’ny vahoaka eny ifotony amin’ny firenena madinika? Nefa mety ho be ny fandravana entiny, ny fanakorontana, ny tahotra… Mahazo vahana izay karazana valanaretina hafa izay koa mahavoa… maneran-tany fa tsy eto ihany: vaovao tsy marina. Mila arosofina sy vava amin’izay re sy lazaina?Rafaly Nd. L’article Valanaretina hafa koa… mahavoa a été récupéré chez Newsmada.
Cnaps: nofanina ny ben’ny Tanàna
Miisa 91 ny ben’ny Ta­nà­na ao amin’ny faritra Ma­tsi­atra Ambony, nofanin’ny Ta­hirim-pirenena misahana ny fiahiana sosialy (Cnaps), ny 4 hatramin’ny 6 oktobra teo tany Fianarantsoa. Niompana tamin’ny fitantanan-draharaha ny fiofanana, sy ny fitantanam-bolan’ny kaominina, ny sata mifehy ny asa. Eo koa ny tombontsoa azo amin’ny fidirana mpikambana ho Cnaps, ny adidin’ny mpampiasa sy ny Cnaps, miampy ny latsakemboka, sns. Tafiditra ao anatin’ny fiaraha-miasan’ny Cnaps sy ny minisiteran’ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana (MID) ity hetsika ity. Tanjona ny ha­mpiakarana ny tahan’ny fisitrahan’ny mpiasan’ny Von­drom-bahoaka itsinjaram-pahefana fiahiana sosialy Cnaps, sy ny handoavan’ny mpampiasa azy ireny ara-potoana ny latsakembony sy ny karamany. Manoloana izany, vonona ny minisitera MID hanampy ara-bola ireo kaominina 91, mba handoavana ny latsakemboka Cnaps tsy voaloany. Aha­fahan’ny Cnaps mandoa ny fanampiana samihafa ny mpikambana izany, toy ny fisotroan-dronono, ny volan-jaza, ny solon-takaitra ho an’ ny marary am-perinasa, sns. Maro ny manam-pahefana nanatrika ity fotoana ity, toy ny loholona, ny solombavambahoaka, ny governor Matsiatra Ambony, ny ben’ny Tanàna sy ny hafa.Njaka A.L’article Cnaps: nofanina ny ben’ny Tanàna a été récupéré chez Newsmada.
Kitra – Fifanintsanana «Mondial 2022»: maniry ny hijoroan’ireo mpilalao tanora ny mpankafy
Hifantoka etsy amin’ny kianja Barea Mahamasina ny mason’ny rehetra, rahampitso. Hotanterahina eo indray mantsy ny lalao miverina hikatrohan’ny Barea sy ny Leopard an’i Congo. Fifanintsanana ho an’ny “Mondial 2022”.Na efa kely aza ny herijikan’ny Barea de Ma­dagascar, hiakarana amin’ny dingana manaraka eo amin’ny fifanintsanana hiadian-toerana ho an’ny “Mon­dial 2022”, mbola naneho fahavononana hanarina ny fahareseny manoloana ny Leopard an’ny RD Congo, ireo mpilalaon’ny Barea, teo am-pahatongavana teto an-tanindrazana, omaly zoma maraina. Fanirian’ny mpan­kafy kosa, araka ireo fanehoan-kevitra tao anaty tambajotran-tserasera sy teny an-dalana ary teny anivon’ny fiarahamonina, ny tokony hampijoroan’ny mpanazatra ireo mpilalao tanora toa an’i Ma­thyas, eo amin’ny fiandrasana ny tsatoby, ry Theodin sy i Sacha miampy an-dry Tsito sy i Tsiry. Hita tokoa mantsy fa saika ireo mpilalao efa somary nahazoazo taona hatrany sy efa nilalao tany amin’ny Can 2019 no niakatra kianja isaky ny milalao ny Barea de Mada­gascar. Avy hatrany dia niatrika fanazarantena ireo mpilalaon’ny Barea, vantany vao tonga ka notanterahina tamin’ izany ny fanamafisana ny tanjaka ara-batana. Nanao ireo fanitsiana teknika teny ambony kianja kosa ny tolakandro. Niara-tonga tamin’ny Barea, omaly zoma, ihany koa ry zareo Congolais. Raha ny fandaharam-potoana, hitsapa ny kianjan’i Mahamasina izy ireo, anio tolakandro. Hitantana ny lalaon’ny roa tonta amin’ity ireo teratany namibianina efatra miraha­lahy dia i Patrice Milazar, eo afovoany ary i Bajee Ram Babajee sy i Akhtar Nawaz Rossaye kosa ny mpitsara an-jorony. I Ganesh Chutooree kosa ny mpitsara fahefatra ary “commissaire au match” ilay afrikanina tatsimo, i Philip George Sinon. Tsiahivina fa rahampitso amin’ny 7 ora alina ny ha­nombohan’ny lalaon’ny roa tonta. Nahazo alalàna mampiditra mpijery 10 000, hana­trika io lalao io, ny federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF).TompondakaL’article Kitra – Fifanintsanana «Mondial 2022»: maniry ny hijoroan’ireo mpilalao tanora ny mpankafy a été récupéré chez Newsmada.
La STAR honore ses collaborateurs : Miisa 217 ireo notolorana mari-boninahitra
Cette année encore, la STAR n’a pas manqué de distinguer ses collaborateurs pour preuve de son engagement et de son attachement envers ses employés. 217 collaborateurs STAR ont été décorés dans l’ensemble de toutes les exploitations de la STAR. Compte tenu du contexte sanitaire dernièrement, les cérémonies de remise ont été organisées dans plusieurs villes de Madagascar au plus proche de ses collaborateurs. Comme tous les ans, chaque cérémonie de remise est dédiée aux collaborateurs récipiendaires pour récompenser leur fidélité envers la STAR, leur remarquable volonté et leur persévérance à la participation active au développement de l’entreprise. Parmi ces collaborateurs, 154 récipiendaires ont obtenu une médaille de travail, 58 récipiendaires ont reçu le grade de « Chevalier de l’ordre national », et, 05 récipiendaires le grade de « l’Officier de l’ordre national ». Les autorités locales ont fait l’amitié et l’honneur de répondre aux invitations, témoignage de l’existence d’un réel partenariat public-privé et de l’intérêt qu’elles portent à la vie et au développement de la STAR. La dernière cérémonie de remise s’est déroulée ce mercredi 13 octobre au Carlton Anosy en présence des 63 collaborateurs récipiendaires des exploitations STAR du grand Tanà et de leur proche. Durant son discours, monsieur RAMBELOARIMANANA Iharinaivo, représentant des récipiendaires, a remercié chaleureusement le Directeur Général de la STAR, Marc POZMENTIER, les membres du Comité de Direction ainsi que les Chefs d’Exploitation qui ont été présents lors de cette remise. « Avec plus de 2550 emplois directs, 5 usines et 15 agences commerciales à travers le pays, Star est un poids lourd de l’industrie nationale. Nous sommes d’ailleurs très fiers de voir apposer sur l’ensemble de notre production le label Malagasy Ny Antsika que nous a attribué le SIM. C’est une reconnaissance de notre implication permanente dans la promotion et la défense du Vita Malagasy cher à chacun d’entre nous (…) Seul, nous ne sommes rien, ensemble nous pourrons déplacer les montagnes et surtout viser les étoiles », d’indiquer monsieur Marc POZMENTIER, Directeur Général de la STAR lors de sa prise de parole. Mankasitraka ireo mpiasa ao aminy ny STAR Toy ny fanao isan-taona dia tsy nanadino nankasitraka ny mpiasa ao amin’ny STAR ho mariky ny fisaorana azy ireo sy fanomezan-danja azy ireo eo amin’ny toerana misy azy tsirairay avy. Miisa 217 ireo mpiasa STAR notolorana mari-boninahitra sy fankasitrahana amin’ireo toeram-piasana misy ny orinasa manerana ny Nosy. Noho ny hamehana ara-pahasalamana nisy teo aloha, dia notanterahina tany amin’ireo faritra samihafa misy ny toeram-piasana STAR ny lanonam-panolorana medaly sy mari-boninahitra mba hanakaiky kokoa ireo mpiasa izany. Ny lanonam-panolorana mari-boninahitra dia natokan’i STAR hisaorana ireo mpisitraka tamin’ny asa sy ny fahafoizan-tena natolony tamin’ny fampandrosoana ny orinasa. Tao anatin’ireo mpiasa 217 ireo dia miisa 154 no nahazo ny « médaille du travail », 58 no nasondrotra tamin’ny mari-boninahitra « Chevalier de l’ordre national » ary 05 kosa ireo nampiakarina amin’ny mari-boninahitra « Officier de l’Ordre National ». Ho mariky ny fiaraha-miasan’ny miankina sy ny tsy miankina dia tonga nanome voninahitra ireo lanonana notronon’ ireo manam-pahefana isan-tsokajiny tamin’ireo faritra samihafa. Anio no notanterahina teny amin’ny Carlton Anosy ny lanonam-panolorana farany ho an’ireo mpiasa STAR miisa 63 eto Antananarivo izay natrehin’ireo akaiky azy ireo. Nandritran’ny lahateny nataon’i RAMBELOARIMANANA Iharinaivo, solo-tenan’ireo nisitraka mari-boninahitra vaovao, dia tsy nanadino nisaotra ny Tale Jeneralin’ny STAR, Marc POZMENTIER, ireo komitin’ny fitantanana ao amin’ny STAR sy ireo nanome manam-pahefana tonga nanome voninahitra ny lanonana androany. « Manome lanja ny indostria malagasy ny STAR satria misandrahaka manerana ny Nosy amin’ny alalan’ny ozinina 05 sy masoivoho miisa 15 ary manome asa raikitra miohatran’ny 2550. Hafaliana ho anay ihany koa ny nahazoana ny marika Malagasy ny Antsika avy amin’ny SIM, izay fanandratana avo ny vokatra vita malagasy (…) Izay mitambatra vato, izay misaraka fasika. Raha miara-miasa dia mety mahafindra tendrombohitra ary indrindra hanatratra ny kintana. » hoy Andriamatoa Marc POZMENTIER, Tale Jeneralin’ny STAR. Cet article La STAR honore ses collaborateurs : Miisa 217 ireo notolorana mari-boninahitra est apparu en premier sur déliremadagascar.L’article La STAR honore ses collaborateurs : Miisa 217 ireo notolorana mari-boninahitra a été récupéré chez Délire Madagascar.
fisafoana indray alina nataon’ny polisy: Jiolahy 29 voasambotra, 57 naiditra “violon”
Ankoatra ireo olona 29 isa voasambotra noho ny asan-jiolahy nandritra ny fisafoana nataon’ny polisy ny alakamisy alina teo, olona 57 hafa voatazona eny amin’ny kaomisaria ka isan’izany ilay polisy nandika ny sata mifehy ny maha miaramila azy.Manoloana ny firongatry ny tsy fandriampahalemana eto an-drenivohitra, nanao hetsika mano­kana, afakomaly alina, ny eo anivon’ny polisim-pirenena. Nisy ny fidinana ifotony sy fanamafisana ny fisafoana eny amin’ireo toerana mafana eto an-drenivohitra. Fantatra, araka ny tatitra voaray fa nahatratra 29 no voasambotra noho ny fanendahana, harom-paosy ary vaky trano. Ankoatra ireo, nisy efatra hafa koa voasambotry ny avy eo anivon’ny kaomisa­rian’Ambohijatovo. Olona telo kosa tratran’ny polisy, miasa eny eny amin’ny kaomisarian’ ny boriborintany faha-III, An­taninandro. Telo voasambotry ny polisin’ny kaomisarian’Isotry. Iray tratran’ny polisy avy ao amin’ny kaomisarian’i Maha­masina, ary ny roa hafa voasambotrin’ny polisy miasa eny Analamahitsy. Ankoatra ireo, olona iray ihany koa tra-tehaky ny polisy miasa ao amin’ny PPA2, olona roa hafa tratran’ny polisy PPA3 raha olona efatra hafa avy ao amin’ny PPA 04. Etsy andaniny, olona valo tamin’ireo 203 nosavaina koa nahazo fampitandremana noho ny tsy fitondrana kara-panondro. Nisy polisy voasambotraAnkoatra ireo, olona 57 isa hafa voatazona eny anivon’ny kaomisaria ka 22 amin’izy ireo, ao amin’ny kaomisaria Tsarala­lana avokoa raha miparitaka eny anivon’ny kaomisaria hafa kosa ireo 35 ambiny. Isan’ireo voatazona amin’izany ilay po­lisy iray am-perinasa. Antony nisamborana azy ny fanaovana fihetsika tsy mifanaraka amin’ ny sata mifehy ny polisim-pirenena. Etsy ankilany, nidina teny amin’ny rond point Jesosy Mamonjy koa ny polisim-pirenena nijery sy nanara-maso ny lalàn’ny fifamoivoizana. Vo­kany, fiara miisa 278 no nosavaina ka 16 tsy navela nandeha noho ny fisian’ny tsy fahatomombanana eo amin’ny lafiny jiro. Moto 23 isa koa tsy nasaina nihetsika. 10 tamin’izany tsy nanana “rétroviseurs”, roa tsy nanao aroloha ary moto 11 hafa tsy tomombana ny jirony.Henintsoa HaniL’article fisafoana indray alina nataon’ny polisy: Jiolahy 29 voasambotra, 57 naiditra “violon” a été récupéré chez Newsmada.
Fanampiana… mampahaleo tena
“Raha misy mangataka trondro, omeo fintana han­jo­no­any”, hoy ny fitenenana malaza iray izay. Zava-dehibe ny fi­fa­nampiana, tsy mahasaraka amin’ny maha olombelona: velon-kifanampy sy hifanasoa, indrindra raha hoe mpiray ta­nindrazana. Vao mainka fa izay manana ady iombonana sy mampiombona: ady amin’ny fahantrana, lehibe sy maika amin’izao. Izay no fanomezan-tanana amin’ny fanampiana. Saingy fanampiana tsy hahatonga fahazaran-dratsy ho lasa fiankinan-doha lava amin’ny hafa amin’ny farany na atao mandavan-taona, fa asiana fetra. “Fanampiana hialana amin’ny fanampiana”, hoy koa ny fitenenana iray izay. Mitondra ho amin’ny fialana miandalana amin’ny fanampiana izany ny fanampiana, fa tsy fiandrasana mahazo lava eny. Izay no anomezana haranjono izay mangataka trondro. Manome lanja ny maha izy azy ny tsirairay ny fanampiana, araka izay mety ho vitany sy azony atao: mbola mahavita matoa ampiana, fa tsy hoe velomina. Any am-piaingana dia efa mila mihetsika, miana-mamindra na mitehina amin’ny hafa aza aloha. Enti-mioitra sy enti-mandroso izany? Koa mila fantarina izay fanampiana atao amin’ny hafa: sao mampiankin-doha lava fotsiny, fa tsy mampahaleo tena? Toy ny rano indray misotro sy sakafo indray mihinana amin’ny fiatoana kely izay mbola handeha lavitra io, tohana aina hahazoana hery enti-miainga hanohizana ny dia. Fa tsy fanampiana hitana azy hijanona eo amin’izay isiany na manahirana azy, sanatria: ahazoana tolo-tanana ka hoe mahatamana, tsy mampihetsika sy tsy mampandroso aza. Tsy tanjona ny fanomezana sy fahazoana fanampiana fa lalana. Mety manimba ny fanampiana? Raha mitana ho amin’ny fiankinan-doha lava mandavan-taona: tsy velona ny tena, raha tsy ampian’ny hafa. Tsy vitan’izany, mety mitarika hakamoana amin’izay ampiana koa ny tolo-tanana lava. Tsy eo amin’ny fifandraisana eo amin’ny samy olona ihany izay, fa na amin’ny fifandraisana amin’ny samy firenena aza: mety mbola misy ny dona tapany hahazoan’ny sasany erany?Rafaly Nd.L’article Fanampiana… mampahaleo tena a été récupéré chez Newsmada.